China FOTON C8 / C9 mveliso kunye nabenzi | Ifoto
Inqanaba elipheleleyo I-9300 * 2450 * 3050/3150 (ye-C9)
Isondo lamavili 4560
Ukunciphisa Ubunzima 8.2T / 8.4T (kunye no-A / C)
GVW 12.2T / 13.2T (nge-A / C)
Umkhweli / Indawo yokuhlala 84 / 10-37
Ulwakhiwo loMgangatho Amanyathelo amabini / Ungeniso olusezantsi
Amandla ePetroli 200L (Idizili) / 8 * 80L (CNG)
Yenzelwe iidolophu ezincinci neziphakathi, iyahlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zothutho ezinje ngemigca yesebe ledolophu kunye nothutho lwasemaphandleni. Uhlobo lobuchule kunye nolukhethekileyo lobuhle, oluhle kunye nolutsha, lukhokelela kwindlela yokuhamba kawonke-wonke yokuhamba.
Iibhasi zasedolophini ze-Foton C8 / C9 zijolise ekunikezeleni isisombululo sokuhamba ngokuqhubekayo kunye nokucoceka kwedolophu kunye nokuphendula kwiimfuno zangoku zothutho lwedolophu ukusuka kwinqanaba loyilo ukuya kwinqanaba lokugqitywa, kugxininiswe kakhulu ekubekweni kokusebenza okuphezulu kakhulu, ukwandisa ibhasi Uluhlu kunye nokwenza ngcono ulawulo lwayo lokuphela kobomi.
Igumbi lenjini lixhotyiswe ngealam yeqondo lobushushu esweni-yexesha-lokwenyani kunye nesixhobo sokucima umlilo ekufezekiseni ukubekwa kweliso kwexesha-lokwenyani; iipleyiti zensimbi zomlilo zisetyenziselwa ukuqinisekisa ngcono ukhuseleko lomqhubi kunye nabakhweli; Izinto ezinganyangekiyo ezilangatye kunye ne-A-grade izinto ezinganyangekiyo ezinelangatye ezinentsebenzo yokhuseleko olungcono zisetyenziswa kufutshane nomthombo wakho wokufudumeza.
I-Foton ingumnini wenqanaba lesizwe imigca yenqanaba lokufakwa kwikhompyutha, isantya sokuvavanywa kwento, ibhedi yokuvavanywa kwebhedi esecaleni, umthwalo we-asi, ibhedi yovavanyo lwe-ABS, inkqubo yokufumanisa uvavanyo lokuqhekeza kunye nabanye, Ukuqinisekisa isatifikethi kunye nokuvunywa kwi-TUV yaseRheinland yaseJamani nase-CNAS elebhu yelizwe.
IFoton ixhotywe ngeebhentshi zovavanyo lobuchwephesha kunye neendlela ezahlukeneyo zovavanyo ukuqinisekisa ukuthembeka kunye nokusebenza kwezixhobo kunye neenkqubo ezilungiselelwe ibhasi yeFoton. Ngobume obungqongqo nobomeleleyo, ibhasi yeFoton imelana necala kwicala elingqameneyo kunye nentloko kunye nokuthintela ukuntywila mva. Ngaphambi kokungena kwinkonzo, bafumana uvavanyo olunzima kunye nokuqinisekiswa.